April 2010 | TechSectors
Ubuntu 10.04 ထွက်ပါပြီ။ နောက်ထွက် version နဲ့ အတူ "Lucid Lynx" မှာ ပိုပြီး ထူးခြားကောင်းမွန်လာအောင် ဖန်တီးထားတာတွေလည်း ပါလာပါတယ်။ တကယ့် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တွေရဲ့ ဦးဆောင်မှု အောက်မှာ "Lucid Lynx" က ဘာတွေများ ထူးခြားလာပါသလဲ ?? ကျွန်တော် သဘောကျတာတော့ တော်တော်များလာပါတယ်။ အကုန်လိုက်ပြောနေရင်တော့ ကုန်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။ ဥပမာ ပြောရရင် Twitter တို့ Facebook တို့လို Social Media တွေကို အသုံးပြုသူ Users တွေအတွက် အလွယ်တကူ အသုံးချနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတဲ့ သဘောကျစရာ Social Manager, နောက် လိုတရ Great Music Store, အရင် Versions တွေထက် သိသိသာသာလေးကို မြန်လာတဲ့ Boot speed, ... စသဖြင့် တော်တော်ကြီးကို သုံးလို့ ကောင်းသွားပါတယ်။ အတိုချုံး ပြောရင် သိပ်ပြီး ဖတ်မကောင်းမှာ စိုးလို့ နဲနဲ ချဲ့ ပြောကြည့်ပါ့မယ်။
ကျွန်တော့် အကြိုက်ပြောရရင် အရင် Ubuntu ကို သုံးပေမယ့် Screen ကို စမြင်ရပြီ ဆိုတာနဲ့ ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ လိမေ္မာ်ရောင်လိုလို အရောင်မွဲခြောက်ခြောက်ကြီးကို မကြိုက်မိဘူး။ ခုကျတော့ Installation စကတည်းက ခုလို Design နဲ့ တော်တော်လေး လန်းနေပြီ။
အခွေထည့် Partition လေးဘာလေး ဟိုပိုင်းဒီပိုင်း ပိုင်းပြီး Install ဆိုပြီး နှိပ်လိုက်တာ ကော်ဖီသွားဖျော်ပြီး ပြန်လာတော့ Installation Process က ပြီးသွားပြီ - ဟာာာ မြန်တာ။
Extreme boot screen
Boot Screen ကတော့ အရင် ပုံနဲ့ လားလားမှကို မဆိုင်ဘူး - ကျွန်တော်စိတ်ထင် တော်တော်ကြီး လန်းသွားသလိုပဲ -
ဟိုကြည့်ဒီကြည့် လျှောက်ကြည့်လိုက်တယ်။ အရမ်းကြီး ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် ပိုပြီး Smart ဖြစ်သွားသလိုပါပဲ။ Linux မှာ Windows ထက်ပိုပြီး သဘောကျမိတာက ခုလိုမျိုး သုံးရလွယ်အောင် စီစဉ်ပေးထားတာပါ။ အမြင်ရှင်းတယ် - သပ်ရပ်တယ် - ဘယ်နေရာမှာ ဘာရှိမယ် ဆိုတာ တစ်ခါမှ မသုံးဖူးတဲ့ သူဆိုရင်တောင် မြင်လွယ် သိလွယ်ပါတယ် -
Pretty Login / Logout
ဒီလိုလေး လုပ်ပေးထားပါတယ် - အရင်ကထက် သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ပို ကြည့်ကောင်းသွားတဲ့ အပြင် - သုံးရတာလည်း ပိုလွယ်သွားသလို ခံစားရပါတယ်။ -
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော် အင်တာနက် ချိတ်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး System ကို Update လုပ်လိုက်တယ်။ အဲတာပြီးတော့ Desktop Effects လေးတွေ သုံးလို့ရအောင် Graphic card driver ကို System > Administration > Hardware drivers ကနေ install လုပ် - Restart ပေးပြီး Desktop Effects ကို Enable ပေးလိုက်တော့ တော်တော်ကြီးကို လန်းသွားပါပြီ။ နောက်ပြီး ကိုယ်သုံးနေကျ Software Packages တွေကို Applications > Ubuntu Software Center ကနေ install လုပ် - အဲ့နောက်မှာတော့ ကိုယ်သုံးနေကျ Applications လေးတွေလည်း တော်တော်စုံသွားပါပြီ။ Desktop background လေးပြောင်း - သုံးနေကျ VLC လေးတင်ပြီး Jessica Folcker ရဲ့ How Will I Know ( Who You Are ) သီချင်းလေးဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် တစ်ခုမေ့နေတာ - မြန်မာဖောင့် သုံးနေကျ ဇော်ဂျီ မတင်ရသေးဘူး။ မြန်မာမိသားစုထဲ ဝင်တော့ fonts တွေက ဝူးဝူးဝါးဝါး ပြနေတာကို တွေ့မှ မြန်မာဖောင့် တင်ရ ဦးမယ် ဆိုတာ သတိရမိတယ်။ အဲတာနဲ့ Zawgyi2008 တင်လိုက်ပါတယ်။ ရင်တထိတ်ထိတ်ပဲ - Versions ပြောင်းတာဆိုတော့ လျောလျောရှုရှုမှ ဖြစ်ပါ့မလားလို့။ ( .deb installer တွေရှိတာ သိပေမယ့် .deb တွေက Stable မဖြစ်သေးဘူးထင်လို့ ကျွန်တော်မသုံးဖြစ်ဘူး။ ) Terminal မှာ install လုပ်ရမယ့် အဆင့် ( i ) နှိပ်ရမှာကို လူက ယောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ ( q ) ဆိုပြီး နှိပ်လိုက်တာ - Quit သွားတယ်။ စစချင်း မသိဘူး အဲတာကို - ငါ Fonts stall လုပ်ပြီးလို့ Quit သွားတယ် ဒီလိုပဲ ထင်တာ - အဲတာနဲ့ မြန်မာမိသားစုထဲ ပြန်ဝင်တော့ မမြင်ရပြန်ဘူး။ မြန်မာဖောင့်က။ လူက ခေါင်းကြီးသွားတယ်။ သေပြီဆရာပေါ့။ Browser's preferences ထဲ ဝင်ပြင်တော့လဲ Zawgyi က ပျောက်နေတယ်။ keyboard ကို Assign လုပ်ဖို့ လိုသေးတာပဲ ဆိုပြီး keyboard ကို ဝင်ကြည့်ပြန်တော့ မြန်မာကို ရွေးလိုက်တယ် - မြန်မာလက်ကွက်က ရှိမနေဘူး။ အဲတာနဲ့ ငါမှားတာ ဆိုတာ သတိထားမိပြီး နောက်တစ်ခေါက် ပြန် Install လုပ်လိုက်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ Zawgyi2009 Install လုပ်တာ လျောလျောရှုရှုပဲ အဆင်ပြေသွားပါတယ် ... မြန်မာဖောင့်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Ubuntu 10.04 မှာ ပြဿနာ မရှိဘူး ဆိုတော့ စိတ်ထဲလည်း တော်တော် ကျေနပ်သွားမိပါတယ်။
kznt@pututu:~$ cd ~/Desktop
kznt@pututu:~/Desktop$ tar xzf burma-keyboard-tk-0.1.1.tar.gz
kznt@pututu:~/Desktop$ cd burma-keyboard-tk
kznt@pututu:~/Desktop/burma-keyboard-tk$ sudo python burma-keyboard-nogui.py
[sudo] password for kznt: password ရိုက်ရန်
Your Linux Distro is Ubuntu 10.04 lucid.
Skip Restoring backup file : You do not haveabackup file.
အဲလိုနဲ့ မြန်မာဖောင့် install လုပ်ပြီးသွားတော့ Restart တစ်ကြိမ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာမိသားစုထဲ ပြန်ဝင်တော့ ခုလိုမြင်ရပါပြီ။
Music Store and Ubuntu One Syncing
Ubuntu Desktop တိုင်းအတွက် Ubuntu One ဆိုတဲ့ cloud syncing service ကနေ free 2GB ပေးတယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော် သိပေမယ့် သူ့ကို ကျွန်တော် သေသေချာချာ မသုံးဖြစ်သေးပါဘူး။ အခုသိရသလောက်တော့ Music Store ကနေ music တွေကို ဝယ်ထားလိုက်ပြီ ဆိုရင် Ubuntu One space နဲ့ သူက automatically synced လုပ်ပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါတင်မက Ubuntu တင်မထားတဲ့ တစ်ခြား ကွန်ပြူတာ အနည်းဆုံး ( ၃ ) လုံးကနေလည်း ဒီသီချင်းတွေကို Download ချနိုင်မယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ Dropbox ရဲ့ Ubuntu version လို့တောင် ပြောရမလိုပါပဲ။ ဘာပဲ ပြောပြော ခုလို Music Store ရှိနေတာ သီချင်းတွေအားလုံး ကိုယ့်လက်တစ်ကမ်းမှာ ရှိနေသလို မျိုးပဲပေါ့။
နောက်တိုး အနေနဲ့ Social networks တွေလို့ ပြောလို့ ရတဲ့ Twitter, Facebook, Flickr တို့ နောက် ကိုယ့် သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေကနေ သဘောကျလို့ Share ပေးထားတဲ့ Feed တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သိပ်သုံးလေ့ မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ Gwibber အကြောင်းက သိပ်သိစရာ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီ့ Social networks တွေကို လတ်တလောမှာ သုံးနေတဲ့ သူ ဆိုရင်ကတော့ Ubuntu 10.4 နဲ့ အတူပါဝင်လာတဲ့ Gwibber အကြောင်းက သိထားမှ ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ Gwibber ကိုသုံးပြီး ဘယ်သူတွေ ဘာတွေ လုပ်နေလဲ - ခုဆို desktop notifications ကနေ တဆင့် တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း သိနေရပြီ။
အရင်တုန်းက Ubuntu မှာ Open source Photoshop အဖြစ် သုံးခဲ့တဲ့ GIMP ရယ် နောက်ပြီး buttons တွေ sliders တွေမျိုးစုံနဲ့ တစ်ချိန်က သုံးရစွဲရ အဆင်မပြေတဲ့ XSane ရယ်ကို Ubuntu 10.04 မှာ ချန်ထားခဲ့ပြီး အသုံးပြုရလွယ်တဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း Simple Scan ကိုထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ GIMP နဲ့ XSane ကို သုံးရစွဲရ အဆင်မပြေဘူးလို့ ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပေမယ့် သူတို့တွေက မကောင်းတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက အဲ့ applications တွေဟာ ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာ တိတိကျကျ သိတဲ့ သူတွေ အတွက်ပဲ သုံးလို့ ကောင်းပါတယ်။ ဂဃနဏ မသိရင်သုံးရတာ လက်ပေါက်ကပ်ပါတယ်။ အဲတာကြောင့် သုံးရအဆင်မပြေဘူးလို့ ပြောတာပါ။
Ubuntu မှာ အသစ်ပါဝင်လာတဲ့ PiTiVi Video Editor က video format အားလုံးကို support မပေးပေမယ့် အသုံးပြုတဲ့ နေရာမှာတော့ drag-and-drop ၊ copy-paste ဆိုတာကို သိယုံနဲ့တင် သူ့ကို အလွယ်တကူ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ ခုစစချင်းမှာ ဒီလောက်ကြီး ကောင်းတာမျိုး မဟုတ်သေးပေမယ့် နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့် Release တွေမှာ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ကောင်းမွန်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ဒါကတော့ လတ်တလော Ubuntu 10.04 မှာ ကျွန်တော် သဘောကျမိတာလေးတွေ အကျဉ်းချုံးပြီး မျှဝေတာပါ။ နောက်ထပ် တွေ့ရှိချက်တွေ - အသုံးဝင်တာတွေ ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့ဦးမယ် ဆိုရင်လည်း ခုလိုပဲ ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
( ၈ ) အခြားသော Languages များအား ရယူအသုံးပြုခြင်း။
ဒီအကြောင်းအရာက အဓိကသိပ်တော့ မကျပါဘူး။ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက် အနေနဲ့ အများဆုံး အသုံးပြုလှ အင်္ဂလိပ်စာ - အင်္ဂလိပ်စကားပေါ့။ ဒါကို ကျွန်တော်လည်း သိသလို လူတိုင်းလည်း သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့သော ဘာသာစကား ( ၂ ) မျိုး ( ၃ ) မျိုး ကျွမ်းကျင်တတ်ကျွမ်းသူ - တစ်ခြားဘာသာ စကား တစ်မျိုးမျိုးကို လေ့လာနေပြီး လက်ရှိကိုယ်သုံးနေတဲ့ ကွန်ပြူတာမှာလည်း ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှု အထောက်အကူပြု အနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာစကားကို ထည့်သွင်းချင်သူတွေ အတွက် ရည်ရွယ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Linux ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ နောက်တစ်ချက်က အပေါ်မှာ ကနဦး ဖော်ပြခဲ့ပြီးသလို ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဘာသာစကားကို desktop မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် applications မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရွေးချယ် အသုံးပြုနိုင်ခြင်းပါ။ ဒါတင်မက ကိုယ်ရိုက်သမျှ စာလုံးတိုင်းကို မှန်မှား စစ်ဆေးပေးမယ့် spelling correctors တွေဆိုတာလည်း အသင့်ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်လို့ စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို အသုံးပြုဖို့ အတွက် ဆိုရင်တော့ Control Center ထဲက Language Support ကို ရှာပါ။ ဒီလိုရှာလို့လည်း ရပါတယ်။
Firefox, Openoffice.org, Thunderbird တို့လို Software တွေက ကိုယ့်စက်မှာ Language တစ်ခုခု ပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့ သူတို့ကလည်း Local ကို လိုက်ပြီး UI language packs တွေ အကုန်ပြောင်းလဲ ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
( ၉ ) Package architecture များအား Force ပေး၍ Install လုပ်ဆောင်စေခြင်း။
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတာ Ubuntu 64 bit ဒါပေမယ့် ကိုယ်သုံးမယ့် ( ကိုယ် install လုပ်ဆောင်မယ့် ) software package က 32 bit ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ။ အဲလိုသာ 64 bit Ubuntu မှာ 32 bit Software package ကို install လုပ်ဆောင်လို့ကတော့ Gdebi-gtk က ခုလို Error message ပြပါလိမ့်မယ်။
ဒီ ပြဿနာက များသောအားဖြင့် Skype, Eclipse, IBM Lotus Symphony လူကြိုက်များတဲ့ Game တစ်ခုဖြစ်တဲ့ World of Goo တို့မှာ များသောအားဖြင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းကတော့ အောက်ဖော်ပြပါပုံစံအတိုင်း အတိုင်း package architecture ကို command line ကနေ တွန်းအားပေးပြီး install လုပ်ဆောင်ခိုင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
( ၁၀ ) အနှစ်ချုပ်။
ကုန်ပြီလား Ubuntu အကြောင်း ... ?? ဟုတ်ကဲ့ .. မကုန်သေးပါဘူး ... Linux နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာစရာတွေ တစ်ပုံတစ်ပင် ကျန်ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော် ရေးထားတာ မဟုတ်တဲ့ မိသားစုထဲက ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေထဲကနေ Linux အကြောင်းကို အားတက်သရော ရေးသား ဆွေးနွေးထားကြတာတွေ ဒီအောက်မှာ စုစည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ အချိန်ရရင် ရသလို လေ့လာကြည့်ကြပါဦး။
Ubuntu Linux , အသင့်တော်ဆုံး Linux OS အား ရွေးချယ်ခြင်း , Linux မြန်မာဘာသာ သင်ခန်းစာများ , Linux OS အကြောင်းသိကောင်းစရာများ , Linux OS Install လုပ်ဆောင်ခြင််း , Linux keyboard shortcuts
Ubuntu 9.10 အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန် အကြောင်းကို ဒီနေရာမှာ အဆုံးသတ်ရင်း နောက် တစ်ရက်အကြာမှာ ထွက်ရှိတော့မယ် Ubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx) ကို လက်ကမ်းကြိုဆိုကြရအောင်ပါ။
( ရ ) Ubuntu တွင် Fonts များ Install လုပ်ဆောင်ခြင်း။
Liberation Fonts ဆိုတာ Microsoft systems က အများဆုံး အဓိကထား အသုံးပြုတဲ့ Times New Roman, Arial, နဲ့ Courier New ဆိုတဲ့ fonts တွေ နေရာမှာ အစားထိုးနိုင်မယ် ဆိုပြီး Red Hat ကနေ အဆိုပြုထားတဲ့ fonts တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က အကြိုက်ချင်း မတူကြဘူး။ Liberation Fonts က Microsoft Fonts တွေ နေရာမှာ အပြည့်အဝနေရာယူနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောထားပေမယ့်လည်း Microsoft Fonts ကိုမှ အသုံးပြုချင်သူတွေ အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ Ubuntu versions တွေမှာတုန်းက ttf-mscorefonts-installer package တွေကို msttcorefonts ဆိုပြီး အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လို့ ubuntu-restricted-extras ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် non-free-codecs meta-packages ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် installed လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသား ဆိုရင် ttf-mscorefonts-installer ကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ system ထဲမှာ installed လုပ်ဆောင်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
( ၃ ) Zawgyi-one နှင့် Ubuntu
Ubuntu မှာ မြန်မာ Fonts တွေ ပေါ်ဖို့ မြန်မာလို ရိုက်နိုင်ဖို့ ဆိုတာကတော့ အရင်က ပြဿနာရှိခဲ့ပေမယ့် ခုတော့ ပြေလည်နေပါပြီ။ ကျကျနန လမ်းညွှန်ထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေ - စာအုပ်တွေဆိုတာလည်း မနည်းမနော ရှိနေပါပြီ။ တစ်ခုရှိတာက ခုနောက်ပိုင်း zawgyi ကို windows မှာလိုမျိုးပဲ double-click ပေးယုံနဲ့ တစ်ခါတည်း install လုပ်ပြီးသား ဖြစ်မယ် ဆိုပြီး .deb package တစ်ခုထွက်တာတွေ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် စမ်းသုံးကြည့်တော့ သိပ်သဘောမကျဘူး။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အဲ့ဖောင့်သွင်းပြီး မြန်မာဆိုဒ်တွေကို ကြည့်တဲ့အခါ လျောလျော ရှုရှုနဲ့ fonts အားလုံး သေသေချာချာ မြင်ရပေမယ့် စာရိုက်တဲ့ အခါကျတော့ လက်ကွက်က ကျွန်တော် Windows မှာ အရင်သုံးနေကျ Zawgyi-one 2008 က လက်ကွက်တွေနဲ့ မတူတာ သွားတွေ့ရတယ်။ ကိုယ်တွေက မြန်မာဖောင့်ရိုက်လာတာ ဇော်ဂျီလက်ကွက်နဲ့ အသားကျနေပြီ ဆိုတော့ အဆင်မပြေတော့ဘူး။ Keyboard Layout မှာ သွားကြည့်တယ် ဘာတွေများ ဘယ်နေရာတွေ ပြောင်းသွားလို့လဲပေါ့။ ပြထားတာတော့ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မရှိဘူး။ သူပြထားတဲ့ keyboard layout မှာတော့ 2008 လိုမျိုးပဲ ရရစ်လေး တစ်ချောင်းငင်လေးလောက် စသဖြင့် နဲနဲလေးပဲ ကွဲတာ ... ဒါပေမယ့် keyboard ကနေရိုက်လိုက်တော့ လုံးလုံးကြီးကို ကွဲနေတာ ဥပမာပြောရရင် ကကြီးကို ရိုက်မယ်ဆိုရင် u ကို ရိုက်ရမယ်။ keyboard မှာ ပြထားတာလည်း u နေရာမှာပဲ ဒါပေမယ့် တကယ်ရိုက်လိုက်တော့ကျ u နေရာမှာ ကကြီး မရှိဘူး။ တစ်ခြား စာလုံးကြီး ဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ့်စက်က ဖြစ်တာလား။ လူတိုင်းဒီလို ဖြစ်သလား။ ကျွန်တော် တိတိကျကျ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ခြား Ubuntu မှာ zawgyi လုပ်နည်းတွေ သိနေသေးတော့ အဲ့ မေးခွန်းကို လိုက်မစဉ်းစားတော့ဘူး။ အရင် ကိုယ်သုံးနေကျ Terminal ထဲကနေပဲ ဝင်ပြီး Run လိုက်တယ်။ အဲတော့မှ အဆင်ပြေသွားတယ်။ Install လုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရတယ် ဆိုတာ ဒီနေရာမှာ မဖော်ပြတော့ပါဘူး။ ဒီအောက်က ပေးထားတဲ့ Link မှာ Zawgyi-one ကို Ubuntu မှာ ဘယ်လို install လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာ တိတိကျကျ ရေးသားပေးထားတဲ့ လမ်းညွှန်ချက် စာအုပ်တွေ ကျွန်တော် စုဆောင်းပေးထားပါတယ်။ အဲ့တာကို Download ချပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။ ပါဝင်မယ့် PDF ( ၄ ) ခုကတော့ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Zawgyione 2009 on Ubuntu 9.10 Karmic
ဒါကတော့ ကျွန်တော် Zawgyi-one 2009 ကို Ubuntu 9.10 karmic မှာ တင်တုန်းက လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လုပ်ဆောင်နည်း အသေးစိတ်ပါ။ အဲ့တုန်းက ရှေ့မှာ .deb ဆိုတဲ့ ကောင်တစ်ကောင် install လုပ်ထားပြီးသား ဖြစ်နေလို့ zawgyi-one 2009 ကို install ထပ်လုပ်တော့ အရင်ရှိပြီးသား .deb ကနေ သွင်းထားတဲ့ zawgyi ကို uninstall လုပ်တဲ့ အဆင့် တစ်ခု ပိုပါနေပါတယ်။ ကျန်တာကတော့ ပုံမှန်ပါပဲ။
kznt@Linuxlife:~$ cd ~/Desktop
kznt@Linuxlife:~/Desktop$ cd burma-keyboard-tk
( ၄ ) အခြား Fonts များအား Ubuntu တွင် install လုပ်ဆောင်ခြင်း။
- Nautilus ထဲရှိ Home folder အား ဖွင့်ပါ။
- Nautilus View menu မှ "Show Hidden Files" option အာ Enable ပေးပါ။
- ".fonts" ( dot ပါပါရမည်။ ) ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ folder တစ်ခု တည်ဆောက်ပါ။
- အခြားလိုအပ်သော Fonts မှန်သမျှအား အသစ်ဖန်တီးလိုက်သည့် folder တွင်းသို့ copy ကူးထည့်ပါ။
- တစ်ချို့ applications တွေအတွက် - restart ပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
( ၆ ) အသုံးမလိုသော software များအား Uninstall နှင့် cleanup လုပ်ဆောင်ပါ။
အသုံးမလိုတဲ့ packages တွေကို စက်ထဲမှာ မထားတာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာ သန့်ရှင်းရေးနဲ့ Performance ကောင်းမွန်ရေးအတွက် အခြေခံအကျဆုံး လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက် တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာနဲ့ ဆက်နွယ်နေကြတဲ့ သူတိုင်း ကိုယ့်ကွန်ပြူတာထဲမှာ install လုပ်ထားပြီး တကယ်တမ်း ဟုတ်တိပတ်တိ မသုံးဖြစ်တဲ့ packages တွေ - softwaes တွေဆိုတာ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေကို ကျွန်တော်တို့ ရှင်းလင်းပစ်ခြင်း အားဖြင့် ကိုယ့်အတွက် တကယ်လိုအပ်မယ့် packages တွေကို နေရာပေးနိုင်သလို - အနည်းဆုံး အသုံးလိုတာတွေ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ဖို့ Free space တစ်ခုတော့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်မက အသုံးမလိုတဲ့ သုံးလေ့မရှိတဲ့ packages တွေကို Uninstalling လုပ်ဆောင်ထားခြင်း အားဖြင့် နောက်ပိုင်းမှာ အဲ့ဒီ့ packages နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမြဲပေးသွားရမယ့် updates တွေအတွက် နေရာလျော့ချပြီးသားလည်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ Ubuntu Linux မှာ ဘာတွေက ကျွန်တော်တို့အတွက် အသုံးမလိုဘူးလဲ။ Users တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အသုံးချပုံခြင်း မတူညီကြလို့ ဒီလူက ဒီဟာ မသုံးဘူးဆိုပေမယ့် တစ်ခြား သူက ဒါကိုပဲ အသည်းစွဲ ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အဲတာကြောင့် လူသုံးနည်းပြီး လူကြိုက်လည်း နည်းတာတွေကို ဦးတည်ချက်ထားပြီး ဘယ်လို ရှင်းမလဲ ဆိုတာ ဆွေးနွေးသွားပါ့မယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ကျွန်တော်အပါအဝင် Users အတော်များများ Evolution, F-spot, Rhythmbox, Tomboy နဲ့ gnome-games တွေကို သိပ်သုံးလေ့ မရှိကြပါဘူး။ ( သူတို့ကို ရှင်းထုတ်ပစ်ခြင်း အားဖြင့် ခန့်မှန်းခြေ 145MB လောက် disk space ပြန်လည် ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ )
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့မှာ Palm smartphone ဒါမှမဟုတ် သူနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ တစ်ခြားအသုံးကိစ္စ မရှိဘူး ဆိုရင် Palm Pilot sync tools နဲ့ သူနဲ့ ဆက်နွယ်နေတာတွေကို ဖြုတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Mono ကို ရှင်းမှာလား ( ဒါမှမဟုတ် မရှင်းဘူးလား)
F-spot နဲ့ Tomboy ဆိုတဲ့ mono ကိုသုံးထားတဲ့ applications နှစ်ခုဟာ karmic koala တွေမှာ default အနေနဲ့ ပါဝင်ပြီးသား applications တြွေဖစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့တွေကို မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ သူတို့ကို ရှင်းထုတ်လိုက်ခြင်း အားဖြင့် 30MB ကနေ 50MB ကြား free space ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အကျယ်နဲနဲ ထပ်ချဲ့ရရင် mono ကို remove လုပ်တယ်ဆိုတာ ideological အရ မကောင်းပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာတော့ အကျယ်မချဲ့ခဲ့တော့ပါဘူး။ ဒီနေရာကနေ သာ တစ်ချက် သွားဖတ်ကြည့်ပါ။ မကောင်းဘူးတွေ ကောင်းတယ်တွေ ဆိုတာထက် Free Software ဆိုနေမှတော့ Users တွေ ကြိုက်တာကို ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ရှိတာမျိုးပဲ မလား။ အဲ့ကြောင့်မို့ Remove လုပ်ချင်သူများ ခုလိုလုပ်ပါ။
( ဘာလုပ်ရမှန်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေသေချာချာ မသိသေးရင် mono ကို Remove မလုပ်ပါနဲ့။ )
မသုံးဖြစ်သော packages များအား Clean လုပ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ System ထဲမှာ ကိုယ်မသုံးဖြစ်တဲ့ libraries တွေ ( တစ်နည်းအားဖြင့် programs and commands များ ) ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ အဲလိုမျိုး တစ်စစီ ဖြစ်နေတဲ့ libraries တွေကို ရှင်းလင်းပေးဖို့အတွက် package deborphan ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ သူက တစ်စစီ ဖြစ်နေတဲ့ libraries တွေကို ရှာဖွေပေးပြီး ရှင်းလင်းပေးဖို့ စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သူ့ကို GtkOrphan လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
GtkOrphan ကိုဖွင့်ဖို့အတွက် Control Center ထဲမှာ ရှိတဲ့ "Remove orphaned packages" ကို ရှာဖွေပါ။
( ဘာလုပ်ရမှန်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေသေချာချာ မသိသေးရင် GtkOrphan ကို မသုံးပါနဲ့။ )
အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ နည်းတွေက Clean တာတော့ Clean တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Clean မတတ်ရင် ရှော့ ရှိပါတယ်။ အဲတာကြောင့် ခု နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ရှော့ မရှိတဲ့ Clean နည်းကို နောက်ဆုံး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
TeamViewer ဆိုပြီး လူသိများတဲ့ remote desktop tool တစ်ခုဟာ Desktop systems တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြား ကြည့်ရှုဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် - နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသုံးချရ လွယ်ကူတဲ့ Tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် အဲ့ဒီ TeamViewer ဆိုတဲ့ remote desktop tool ကို Linux အသုံးပြုသူ users တွေအတွက်ပါ ထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။ အတော်လေး ကျေနပ်စရာပါပဲ။ ခုဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့် သူငယ်ချင်းတြွေကား မတူညီတဲ့ OS တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြားမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်ဖို့ ဆွေးနွေးအကြံပြုနိုင်ဖို့ အရမ်းကို လွယ်ကူသွားပါပြီ။
TeamViewer ကို သုံးခြင်းအားဖြင့် အစတည်းကမှ ခနော်နီ ခနော်နဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့် ကွန်ပြူတာပေါ် နောက်ထပ် VNC Setting တွေဆောက်ပြီး connect လုပ်ဖို့ရာအတွက် ပြင်ဆင်စရာ မလိုတော့ပဲ အလွယ်တကူနဲ့ ကွန်ပြူတာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြား Connecting လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Home နဲ့ non-commercial user တွေအတွက် Free ပေးထားတဲ့ TeamViewer ကို Linux users တွေ အနေနဲ့ Download ရယူချင်မယ် ဆိုရင် ဒီ အောက်က ဖော်ပြပါ link ကနေ သွားရောက် ရယူနိုင်ပါတယ်။
TeamViewer Download (Linux)
( ၁ ) ကျွန်တော် Windows7တင်ချင်တယ်ဗျာ ... ကျွန်တော့် စက်က Drive ကလည်း မကောင်းတော့ဘူး ... ဖြစ်နိုင်ရင် USB Flash Drive ကနေများ တင်လို့ မရနိုင်ဘူးလား ??
( ၂ ) ကျွန်တော့်စက်ကတော့ Windows ခွေထည့်ဖို့ Drive ကို မရှိတာဗျို့ ... တင်ချင်ရင် USB flash drive ကနေ တင်မှပဲ အဆင်ပြေမှာ ... အဲတာ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလည်းလည်း မသိဘူး ??
( ၃ ) ကျွန်တော် မနေ့က Netbook တစ်လုံးဝယ်လာတယ်ဗျ ... တင်ချင်တာက Windows7.. DVD Drive ကလည်း ပါမလာဘူးဗျာ ... အခု အဲတာ ဒုက္ခရောက်နေတယ် ... ကူပါဦး။
အဲ့လို ပြသနာပေါင်း များစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရသူများအတွက် အလွယ်တကူနဲ့ အပြေလည်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် Tool တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ အင်တာနက် ထဲမှာ ရှာကြည့်ရင် Windows7ကို USB flash drive ကနေ Install လုပ်ဆောင်ဖို့ Command Line ကနေ လုပ်ဆောင်နည်းတွေ - တစ်ခြား Tools တွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ အဆင့်လိုက် ပြင်ဆင်ပုံတွေ များစွာ ရှိနေပေမယ့် ဒီ ဖော်ပြပါ Tool ကတော့ Microsoft ကနေ တိုက်ရိုက် သူ့ Windows7သုံးသူတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင် ဖန်တီးပေးထားတဲ့ Tool တစ်ခုမို့လို့ Error လည်း နည်းသလို စိတ်လည်း စိတ်ချရပါတယ်။ သူ့နာမည်ကတော့ Windows7USB/DVD Download tool ပါ။ သူ့ကို ဖော်ပြပါ နေရာကနေ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Windows7USB/DVD Download tool ကို Install လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက် -
Windows7USB/DVD Download tool ကို ဒီနေရာကနေ ရယူပါ။
Download Dialogue box တစ်ခု တက်လာရင် ကိုယ့်စက်ထဲမှာ သိမ်းထားချင်တဲ့ အခါ Save ကိုရွေးပြီး - တစ်ခါတည်း Run ချင်တာ ဆိုရင်တော့ Run ကိုနှိပ်ပါ။ လောလောဆယ်တော့ Save လုပ်လိုက်ပါမယ်။ ပြီးတော့ Download complete ဖြစ်တဲ့ အခါ exe file ကို ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အဆင့်လိုက် Run သွားပါ့မယ်။
ဖော်ပြထားချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီးသွားရင် Windows7USB/DVD Download Tool ကို ခုအောက်မှာ ဖော်ပြထားသလို Install လုပ်ဆောင်ပြီးသား shortcut တစ်ခုအဖြစ် Desktop ပေါ်မှာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Note: Windows7USB/DVD Download tool ကို install လုပ်ဆောင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာကွန်ပြူတာကို အသုံးပြုသူဟာ အဲ့ကွန်ပြူတာရဲ့ Administrator ( သို့မဟုတ် ) Administrator access ရရှိထားသူ ဖြစ်ဖို့လိုသလို တကယ်လို့ လက်ရှိ Windows XP ကို သုံးနေသူ တစ်ယောက်ဖြစ်မယ် ဆိုရင်လည်း အဲ့ Tool ဟာ Microsoft .NET Framework version 2.0 ဒါမှမဟုတ် သူ့ထက် version မြင့်မြင့် တစ်ခု install လုပ်ဆောင်ပြီးသား ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။
System Requirements များအား လေ့လာပါ။
Windows XP Users များအတွက်။
Windows XP users များအနေနဲ့ Windows7USB/DVD Download tool ကို Install မလုပ်ဆောင်ခင် အောက်ဖော်ပြပါ applications များကို install လုပ်ဆောင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
Microsoft .NET Framework 2.0 ကို Install လုပ်ဆောင်ထားရပါမယ်။ ဒီနေရာကနေ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Microsoft Image Mastering API v2 Install လုပ်ဆောင်ထားရပါမယ်။ ဒီနေရာကနေ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Windows7USB/DVD Download Tool အား အသုံးပြုခြင်း။
ပထမအဆင့် - ပြင်ဆင်ခြင်း။
• အနည်းဆုံး4GB နှင့် အထက် ပမာဏရှိသည့် USB flash drive
• Windows XP, Vista သို့မဟုတ်7စသည့် OS တစ်ခုခု တင်ထားသော Computer
• Windows7DVD သို့မဟုတ် .ISO file
• Download ချ၍ Install လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ရမည့် Windows7USB DVD Tool
အားလုံးပြည့်စုံပြီ - Install လုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင် Windows7USB DVD Tool ကို All Programs ကနေ ဖြစ်ဖြစ် - Shortcut icon ကနေဖြစ်ဖြစ် စပြီး Run ပါ့မယ်။
ဒုတိယအဆင့် - စတင်ခြင်း။
• ဒီအောက်က Screen ကို စတင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
• ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ ရှိနေတဲ့ Windows7.ISO file ရဲ့ တည်နေရာကို Browse ကနေ ညွှန်ပေးပါ့မယ်။ ပြီးရင် Next ကို ပေးပါ။
• ဘယ်လို media type ကိုသုံးမလဲ - ဒီအောက်မှာ ဆိုရင် ကျွန်တော် ဥပမာ အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့က USB ကနေ Install လုပ်ဆောင်မှာ မို့ USB device ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ့မယ်။
• အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ကိုယ့်စက်မှာ ဆင်ထားတဲ့ USB drive ကို drop down menu ကနေ တစ်ဆင့် ရွေးချယ်ပေးပါ့မယ်။ တကယ်လို့ ပျောက်နေသေးရင် Refresh ကို နှိပ်ပါ။ အဲတာမှ မတွေ့သေးရင် USB drive ကိုဖြုတ်ပြီး ပြန်တပ်ပါ။
• Begin copying ကို ဆက်နှိပ်ပါ။
• Windows7USB DVD Tool ကနေပြီး ISO File ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ files တွေကို USB drive ရှိရာဆီ အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအတိုင်းစတင် Copy ကူးပါလိမ့်မယ်။
• အကယ်၍ USB drive က နေရာလိုလို့ data တွေဖျက်ဖို့လိုမယ်ဆိုရင်လည်း ဖျက်လိုက်ပါ။
• အားလုံးပြီးသွားရင် USB DVD Tool ကို ပိတ်လိုက်ပါ။
တတိယအဆင့် - စမ်းသပ်ခြင်း။
• အခု ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးပြီးသွားတဲ့ bootable USB drive ကို install လုပ်ငန်း မလုပ်ဆောင်ခင် အရင်ဆုံး ကောင်းမကောင်း စမ်းသပ်ကြည့်ပါမယ်။
• MobaLiveCD ကို ဒီနေရာကနေ ရယူပါ။
• MobaLiveCD က ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးထားတဲ့ USB drive ထဲက Windows ကို စက်မှာ တကယ် install လုပ်ဆောင်စရာမလိုပဲ စမ်းသပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
• ပုံမှာမြင်နေရတဲ့ Run the LiveUSB ကို Click ပေးပါ။
• ပြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့ USB drive ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း Dropdown menu ကနေ ရွေးပေးပါ။
• Windows7setup ဟာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။
စတုတ္ထအဆင့် - Installation လုပ်ဆောင်ခြင်း။
• Netbook မှာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် - တစ်ခြား Laptops, Desktops တွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် USB ကနေ install လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက် နည်း ( ၂ ) နည်း ရှိပါတယ်။ ရိုးရိုး OS ထဲကနေပဲ install လုပ်ဆောင်တဲ့ နည်းနဲ့ USB ကနေ boot လုပ်တဲ့ နည်းပါ။
• OS ရှိပြီးသား Windows ထဲကနေ install လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ USB device ရှိရာဆီ သွားပြီး setup.exe ကို double click ပေးလိုက်ယုံပါပဲ။
• အဲလိုမှ မဟုတ်ပဲ USB ကနေ Boot လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ BIOS မှာ ပုံမှန် လုပ်ဆောင်နေကျ အတိုင်း USB ကို 1st boot ထားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို Windows7ကို USB ကနေ install လုပ်ဖို့ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ရမယ် ဆိုတာ နားလည်နိုင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
တစ်ခြား မေးစရာတွေ အသေးစိတ် လေ့လာစရာတွေ ရှိဦးမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာကနေ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
( ၅ ) System & administration software
( ၁ ) Firewall Setup ပြုလုပ်ခြင်း။
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ Ubuntu မှာ Firewall install လုပ်ဆောင်ထားချင်မယ် ဆိုရင် ufw လို့ခေါ်တဲ့ (Uncomplicated Firewall) က default အနေနဲ့ installed လုပ်ဆောင်ထားပေးပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် active တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါ့အပြင် Gufw ဆိုတာလည်း ufw အတွက် သင့်တော်တဲ့ GUI တစ်ခုပါပဲ။
Software Center ကနေ Install လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက်ကတော့ "gufw" ဆိုတာကို ရှာပြီး install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။ Gufw ကို အသုံးချဖို့ ခေါ်ထုတ်မယ် ဆိုရင်တော့ System > Administration > Firewall configuration ကနေ ဆွဲခေါ်လို့ ရပါတယ်။
တစ်ခုသတိထားရမှာက ဒီ Services ကို သုံးတော့မယ် ဆိုရင် ftp, pop3, smtp တွေ အတွက် ကြိုပြီး ပြင်ဆင်ထားပြီးသား ဖြစ်နေဖို့ လိုပါတယ်။
( ၂ ) Anti-virus installation လုပ်ဆောင်ရန် ( မလို ) ပါ။
လူအများစုက Linux ကိုရောက်လာရင် Anti-virus ကို Install လုပ်မထားပဲ နေလို့ရမှန်း သိထားကြပါတယ်။ အမှန်တကယ်လည်း firewall နဲ့ updating ကို ပုံမှန် လုပ်ဆောင်နေရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ System ကလည်း တကယ်ကို လုံခြုံနေပါတယ်။ တကယ်ရော ဟုတ်ရဲ့လား ?? လူတိုင်းက ဒီမေးခွန်းကို တကယ်ပဲ မေးတတ်ကြပါတယ်။ အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဖော်ပြချက်ကိုပဲ ဘယ်လောက်ပဲ ရှည်လျားထြွေပားအောင် ရှင်းပြပြ သူတို့ရဲ့ စက်ထဲမှာ Antivirus လေး တစ်ခုရှိမှ နေသာထိုင်သာ ရှိသလို ခံစားနေကြရတဲ့ လူတွေလည်း မနည်းပါဘူး။ ခုခေတ်မှာတော့ Kasperky ကစလို့ Symantec အလယ် McAffee အဆုံး computer security companies တွေက Linux system အတွက် antivirus ကို ထုတ်လုပ်လာကြပါပြီ။ ဒါကလည်း Users တွေက ကွန်ပြူတာဆို antivirus တင်ထားမှ ဆိုတဲ့ အသိကြီးအောက်မှာ အမြတ်ထုတ်လာကြတဲ့ ရလာဒ် တစ်ခုပါပဲ။ မဖြစ်မနေ ဝယ်သုံးရတော့မယ် လို့တော့ မထင်စေချင်ပါဘူး။
ClamAV ဆိုတာ free open source cross-platform anti-virus တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ GUI က ClamTk ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ ပထမဆုံး ရွေးချယ်သင့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူ့ကို install လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် Software Center ကနေ "Virus Scanner" လို့ရှာပြီး install လုပ်လို့ ရပါတယ်။ သူ့ကို Access လုပ်ဖို့ ဆိုရင်လည်း Applications > System Tools > Virus Scanner ကနေ access လုပ်လို့ ရပါတယ်။
Ubuntu repositories ကနေ ပေးမထားတဲ့ ClamTk နောက်ဆုံး version ကို update ရယူချင်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာကနေ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ Update လုပ်ဆောင်ပြီး သွားမယ် ဆိုရင်တော့ ClamTk အတွက် shortcut က အောက်ဖော်ပြပါ နေရာမှာ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
ClamTk ပြီးရင် ဒုတိယရွေးချယ်မှု ဖြစ်သင့်တာကတော့ Avira ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ freeware version ကို ဒီနေရာကနေ ရယူနိုင်ပါတယ်။ တတိယရွေးချယ်မှု ဖြစ်သင့်တာ ကတော့ Avast ကနေ ထုတ်ထားတဲ့ "Linux Home Edition" ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
( ၃ ) Services တစ်ချို့နှင့် Startup programs တစ်ချို့အား Disable ပေးထားပါ။
( ၁ ) Boot-up Manager နှင့် Service အား ပြင်ဆင်ပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ Ubuntu versions မှာတုန်းက ဘယ်နေရာမှာ system services တွေကို (de)activate လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြတဲ့ dialog တစ်ခုပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ အဲ့ကောင်ကို System > Administration > Services အောက်မှာ ကျွန်တော်ရှာလို့ မတွေ့တော့ ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကတော့ သူ့ကို ဖျောက်ပစ်လိုက်တယ် ထင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် "Boot-Up Manager" လို့ခေါ်တဲ့ application တစ်ခု software center မှာ install လုပ်ဖို့ ရှိနေပါသေးတယ်။ သူ့ကို သုံးပြီး services တွေကို ကျွန်တော်တို့ manage လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ဒီအောက်မှာ Bluetooth ကို deactivate လုပ်ပြထားပါတယ်။
( ၂ ) မလိုအပ်သော startup programs များအား Disable ပေးထားပါ။
တကယ်လို့များ default ပါလာတဲ့ startup programs တွေထဲက တစ်ချို့ကို မလိုအပ်ဘူးလို့ ယူဆရင် သူတို့တွေကို startup စာရင်းထဲကနေ ဖြုတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ bluetooth manager, evolution alarm notifier, remote desktop server, visual assistance, ...စသဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖွေရမယ့် နေရာကတော့ Control Center မှာ ရှိနေတဲ့ "Startup Applications" ပါ။
( ၄ ) အခြားသော useful tools များ
( ၁ ) Gparted ခေါ် powerful partition editor
GParted ဆိုတာလည်း Partition Magic နဲ့ ဆင်တူတဲ့ partition editor တစ်ခုပါပဲ။
Start-Up Manager ဆိုတာ graphical tool တစ်ခု ဖြစ်ပြီးတော့ boot loader နဲ့ splash screen Settings တွေကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ Software Center မှာ "startup manager" ဆိုတာကို ရှာပြီး Install လုပ်ပါ။
Start-Up Manager ဟာ GRUB menu timeout ကို Ubuntu မှာ change ဖို့ အလွယ်ကူဆုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မိမိစိတ်ကြိုက် bootloader menu timeout ကိုချိန်ညှိထားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့0seconds မှာ ထားမယ်ဆိုရင်တော့ GRUB က "default operating system" အတိုင်းပဲ boot လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခုခုဆို Tweak လုပ်ချင်တဲ့ သူမျိုးတွေအတွက်တော့ Ubuntu Tweak က မဆိုးပါဘူး။ အသုံးလည်း ဝင်ပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် file အမျိုးအစားတွေကို manage လုပ်တဲ့ နေရာမှာ - နောက်ပြီး third party repositories တွေကို အလွယ်တကူ install လုပ်ဆောင်မယ့် နေရာမှာ စသဖြင့် အသုံးတည့်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Ubuntu က version တစ်ခု မြင့်လာတိုင်း ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် ကြိုးစားလာလိုက်တာ ခုဆိုရင် အရင်က ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက် လုပ်ဆောင်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အားလုံးကို Windows မှာလိုပဲ Ubuntu မှာလည်း System menu အောက်မှာ အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နေနိုင်ပါပြီ။ လေ့လာကြည့်ကြပါ။
Download နဲ့ Installation instructions ကတော့ ဒီနေရာမှာပါ။.
Truecrypt ဆိုတာ encryption software application တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ GUI ကလည်း တော်တော်လေး ကောင်းပြီး Source code ကိုလည်း ရယူနိုင်ပါတယ်။
.deb အနေနဲ့ Download ရယူချင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာပါ။.
ခေတ်တွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာခဲ့ပါပြီ။ အရင်တစ်ချိန်က အစစ အရာရာ ယောကျာင်္းတွေ ဦးဆောင်လှုပ်ရှားကြရတဲ့ ခေတ်ကနေ ခုမျက်မှောက်ခေတ်မှာ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ရဲ့ အရေးပါအရာရောက်မှုကို လုပ်ငန်းပိုင်း ဆိုင်ရာကနေ အစ အိမ်မှုကိစ္စအဆုံး တန်ဖိုးထားလာကြရပြီ။ အမျိုးသမီးဆိုပေမယ့် အမျိုးသားတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်း စွမ်းဆောင်လာနိုင်လိုက်တာများ ကိုယ် အမျိုးသားတွေကိုတောင် ကျော်တက်သွားတော့မလား ထင်နေရပါပြီ။ ဒါဘာကြောင့် များပါလဲ။ သူတို့တွေမှာ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ရှိမှာတော့ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ထင်နေတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာ တကယ်တော့ လျှို့ဝှက်ချက် တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတွေက မိန်းကလေး တစ်ယောက်အတွက် ပုံမှန် လုပ်ဆောင် လည်ပတ်နေကျ သမားရိုးကျ လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုပါပဲ။ ဒါဆို အဲတာတွေက ဘာတွေများလဲ။ Designer ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်မယ့် သူတစ်ယောက်အတွက် ၂၁ ရာစုမှာ တရှိန်ထိုးထွန်းပေါက်အောင်မြင် လာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဆီက သင်ယူလို့ရမယ့် ပညာရပ်တွေ အကြောင်းကို ဒီကနေ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
လူတိုင်း လူတိုင်းအတွက် မိန်းကလေးတွေဆီကနေ သင်ယူရမယ့် ပညာရပ်တွေ မနည်းမနောရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ Designer လုပ်မယ့် သူတွေ အတွက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ကြည့်မိရင် ဘာတွေကိုများ အရင်ဆုံး သတိထားမိပါသလဲ ?? သူတို့ ဘယ်လိုဝတ်စား ဆင်ယင်ထားသလဲ - သူတို့ ဘယ်လို ပြုမှုဆက်ဆံသလဲ ဆိုတာပဲ မလား။ ဒါတွေကနေပဲ Designer တစ်ယောက်အတွက် မိန်းကလေး တွေဆီကနေ သင်ယူသင့်မယ် အကြောင်းတရား ( ရ ) ကို ခုလိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
( ၁ ) အချိန်စီမံခန့်ခွဲခြင်း
Photo By blank00x
ယောကျာင်္းလေးနဲ့ မိန်းကလေး နိှုင်းယှဉ်မယ် ဆိုရင် မိန်းကလေးတော်တော်များများက သူတို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းကိစ္စ အားလုံးလိုလိုကို အသေးစိတ် scheduled ဆွဲပြီး လုပ်ဆောင်တတ်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တစ်နေ့တာလုံးအတွက် ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်ကို သွားမယ် ၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘာကို လုပ်မယ် ၊ ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်မှာချိန်းမယ် ဆိုတာတွေကို အံ့သြဖို့ ကောင်းလောက်အောင် အသေးစိတ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတတ်ကြပါတယ်။ Designer ဆိုတာ အချိန်အတိအကျ ခန့်မှန်းဖို့ ခက်တဲ့ လုပ်ငန်းကိစ္စ တစ်ခုထဲမှာ ဝင်ရောက် လုပ်ဆောင်ရတာမျိုးလည်း ရှိသလို - ကိုယ်ခန့်မှန်းထားတဲ့ အချိန်ထက်ပိုပေးပြီး လုပ်ဆောင်ရတဲ့ လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကြောင့် တစ်ခြား လုပ်ငန်းပိုင်း ဆိုင်ရာတွေမှာ အနှောင့်အယှက်တွေ ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် လူအများရဲ့ အထင်အမြင်သေးခံရတာမျိုးတွေ ရှိလာနိုင်တဲ့ အတွက် Time Management ကို မိန်းကလေးတွေလိုမျိုး တိတိကျကျဖြစ်အောင် scheduled ဆွဲပြီး လုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ သင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မိန်းကလေးတွေဆိုတာ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ရပ်တည်နေရတဲ့ သူတို့ရဲ့ အချိန်တွေထဲကမှ - ဘယ်အရာကိုတော့ ငါ မဖြစ်မနေ လုပ်ကိုလုပ်ရမယ် ဆိုပြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိုက်နာတာမျိုး တွေလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အဲလိုပဲ Designer ဆိုတာလည်း ပြဿနာရပ်တစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ရပြီ ဆိုတဲ့ အခါမှာ ဒီပြဿနာရပ် အတွက် ငါ အချိန်ဘယ်လောက်ပေးမလဲ - ဘယ်အချိန်မှာ ဒီ ပြဿနာရဲ့ အဖြေကို စဉ်းစားမလဲ - ဘယ်အချိန်မှာတော့ တစ်ခြား ဖန်တီးပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်မလဲ ဆိုတာ ဦးတည်ချက်ထားပြီး ရင်ဆိုင်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
( ၂ ) စမ်းသပ် ပြင်ဆင်ခြင်း
Photo By Miss Peach
မိန်းကလေးတွေဆိုတာ သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အမြဲ ဆင်ယင်အသုံးပြုရမယ့် အလြှပင်ပစ္စည်းကအစ ၊ ဆံပင်ပုံစံအဆုံး ကိုယ်နဲ့ ဘာက ဘယ်လို လိုက်ဖက်မယ် ဆိုတာ အမြဲစမ်းသပ်ပြင်ဆင် နေကြတဲ့ လူအမျိုးအစားထဲမှာ ပါပါတယ်။ အဲလို စမ်းသပ်မှုလေးတွေ လုပ်ပြီး သူတို့တွေအတွက် ဘယ်လိုပုံစံလေးက လိုက်ဖက်မယ် ဆိုတာ အမြဲလည်း ထိန်းသိမ်းထားတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ ပြရမယ်ဆိုရင် Lady GaGa တို့ ကျွန်တော်သိတဲ့ မြန်မာမင်းသမီးထဲကဆိုရင် နဝရတ်တို့ ( ခုခေတ်မှာတော့ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ထက် ပိုလန်နေလဲ တိတိကျကျ မသိတော့ပါ။ )။ Designer ဆိုတာလည်း ထိုနည်း လည်းကောင်းပါပဲ။ ကိုယ် ဖန်တီးမယ့် Design နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိန်းကလေးတွေလို အမြဲတမ်း စပ်စပ်စုစု ပြင်ဆင်စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နေမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ခုခေတ်က ideas အသစ်တွေ ၊ ဆန်းသစ်မှုအသစ်တွေကို လူတိုင်းကလည်း ဝမ်းပန်းတသာနဲ့ လက်ကမ်းကြိုဆိုနေကြတဲ့ ခေတ်မလား။ Designer တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်မှုတိုင်းကို ရဲရဲဝင့်ဝင့် အရောင်တင်ရဲဖို့ လက်မနှေးသင့်ဘူးလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။
( ၃ ) အရောင်များ အကြောင်း
Photo By suky28
မိန်းကလေး အများစုဟာ သူတို့ ဝတ်တဲ့ အဝတ်အစား ၊ make-up ၊ နောက် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ၊ ဖိနပ်ကစပြီး အသေးစိတ် ဂရုစိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ကျကျနန ဝတ်စားပြင်ဆင်ထားတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ယောက်ကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရပြီ ဆိုတာနဲ့ သေသေချာချာသာ စူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပါ - သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာ နေရာတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အရောင်ရောစပ်မှုတွေကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အားသာချက်ပါပဲ။ သူတို့တွေဟာ သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ မတူညီ ကွဲပြားလှတဲ့ အရောင်ရောစပ်မှုတွေကို နေသားတကျဖြစ်အောင် ဆင်ယင်ပြီး ဘေးလူတွေ မှင်သတ်ငေးမောရလောက်အောင် ပြင်ဆင်တတ်ကြပါတယ်။ Designer တစ်ယောက်ဆိုတာလည်း သူတို့လိုမျိုး မတူညီကွဲပြားလှတဲ့ အရောင်တွေကို ကိုယ် ဖန်တီးမယ့် Design တစ်ခုမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်လိုမျိုး နေသားတကျ ဖြစ်အောင် ပေါင်းစပ်ပြင်ဆင်တတ်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။
( ၄ ) ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး
Photo By Super Qatari
မိန်းကလေး အများစုဟာ ပတ်ဝန်းကျင်သစ် နေရာသစ်တစ်ခုမှာ အလွယ်တကူ ပျော်ဝင်ပေါင်းစည်းနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါတွေ အားလုံးက ဘာကြောင့်လည်း ဆိုရင် သူတို့တွေ အားလုံးမှာ သဘာဝက ဖန်တီးပေးထားတဲ့ စကားပြောနိုင်စွမ်း အလွန်တရာ မြင့်မားကြလို့ဖြစ်ပြီး - လူမှုဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်မှာလည်း တကယ်ကို ကျယ်ဖြန့်နိုင်သူတွေ အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလား .. မကသေးပါဘူး - သူတို့ ပါးစပ်ကနေ " ဟိတ် ... " ဆိုပြီး စကားတစ်ခွန်း စလိုက်တာနဲ့ တခဏချင်း သူငယ်ချင်းတွေ အမြောက်အများရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Design community ဆိုတာလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ Design community ထဲမှာ နေတဲ့ Designer တစ်ယောက်ဆိုတာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ဖို့ - စကားတစ်ခွန်းစ နှစ်ခွန်းစ ပြောလိုက်ယုံနဲ့ တစ်ဖက်သူကို အာရုံကျလာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ အရည်အသွေးတွေ တကယ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။
( ၅ ) ပေါင်းစပ်စုစည်းနိုင်ခြင်း
Photo By Garrett2
တကယ်လို့များ စာဖတ်သူဟာ မိန်းကလေး တစ်ယောက် နေတဲ့ အခန်း တစ်ခန်းကို တွေ့ဖူးခဲ့မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ ပေါင်းစပ်စုစည်းနိုင်မှု ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ကောင်းကောင်း နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ အခန်းတွေထဲမှာ ဆိုရင် သူတို့ နေ့တိုင်း သုံးနေတဲ့ handbags အိတ်ဆို အခု ( ၁၀၀ ) လောက် ၊ နောက် ဖိနပ်ဆို အရံ ( ၁၀၀၀ ) လောက် စသဖြင့် ရေတွက်လို့ မကုန်နိုင်အောင် သူတို့ရဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေက များပြားလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သိပ်အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။ သူတို့တွေ အားလုံးက အဲလောက်များပြားလှတဲ့ သူတို့ပစ္စည်းတွေကို တစ်ခုမှ မပျောက်ရှပဲ အလိုရှိတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ ဘယ်နေရာ ဘာထားတယ် - ဘာကိုလိုချင်ရင် ဘယ်နေရာမှာ ရှိတယ် ဆိုတာ - ချက်ချင်းသိသလို ခဏချင်လည်းး ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုးပဲ Designer တွေဆိုတာလည်း တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာထဲမှာ digital data တွေကို မနည်းမနော ထည့်ပြီး လှုပ်ရှားနေရတာပါ။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းအချက်အလက် တိုင်းကို မိန်းကလေးတွေလို စုစည်းပေါင်းစပ်ထားနိုင်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။
( ၆ ) ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်း
Photo By acidjkt
အငြင်းပွားရတယ် - ငြင်းခုန်ရတယ် - အခြေအတင် စကားပြောရတယ် ဆိုတာ ငွေကြေးကိစ္စတွေ ပါဝင်လာမှ ဖြစ်တတ်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခြား အကြောင်းအရာ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့တွေ နေ့တိုင်း ငြင်းခုန်ရ အခြေအတင် စကားပြောရတာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရရင်တော့ ဆွေးနွေးရတယ်ပေါ့။ ဆွေးနွေးရတဲ့ နေရာ - ငြင်းခုန်ရမယ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာဆိုရင်တော့ မိန်းကလေးတွေက ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဖြစ်ဖြစ် တော်တော် ထက်မြက်ကြပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် Shopping ထွက်ကြတဲ့ အချိန်မှာ - နောက်ပြီး ကောင်လေး တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားနိုင်လုပြောရတာ - စတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ ဆိုရင် သူတို့ အမြဲနိုင်ကြတာချည်းပါပဲ။ အဲ့လိုပဲ တစ်ဖက်ကနေ လှည့်ပြောရရင် Designer ဆိုတာလည်း ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးရတဲ့ Technique ကို ကိုယ့် Design ကို အသုံးပြုတဲ့ Users တွေနဲ့ တွေ့တဲ့ အခါ ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ Design နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသုံးပြုဖို့ နှစ်ခါပြန်တွေးစရာ မလိုအောင် - နောက် ကိုယ့် Boss က ကိုယ့်ဖန်တီးမှုတိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ်နဲ့အငြင်းပွားစရာ မလိုအောင် ဒီ Technique ကို ကောင်းကောင်း အသုံးချတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
( ရ ) ဖန်တီးနိုင်ခြင်း
Photo By breeleed
မိန်းကလေးတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆန်းသစ်တဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကို ပြောင်မြောက်အောင် အဖန်တီးနိုင်ဆုံး သူတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောမယ် ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ လူအတော်များများကလည်း ဒီ စကားကို သဘောတူ လက်ခံကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးအတော်များများက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတွေထက် အဲဒီ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထဲမှာမှ တစ်ခုခု ထူးထူးခြားခြားလေး ဖြစ်သွားအောင် ထည့်သွင်းပေါင်းစပ် လိုက်ရတာမျိုးတွေ - နောက်ပြီး တစ်ခြားသူတွေ သတိထားမိသွားအောင် ထူးထူးခြားခြား ဆန်းသစ်လိုက်ရတာမျိုးတွေကို နှစ်သက်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမြဲတမ်း ဆန်းသစ်ဖန်တီး နေနိုင်ရမယ့် Designers တွေဆိုတာလည်း တစ်ခြားသူတွေကနေပြီး ကိုယ့် Design အပေါ် အသိအမှတ်ပြုချင်လာအောင် - တန်ဖိုးထားလာအောင် - အခြားသူတွေနဲ့ မတူပဲ ကိုယ့် Design ကို အားလုံးရဲ့ ကြားထဲက ဖောက်ထွင်းပြီး မြင်သာလာအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ရပါတယ်။
အဲတော့ တကယ်လို့များ စာဖတ်သူဟာ Designer တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ဖန်တီးနိုင်မှု - ရှု့မြင်တတ်မှုအပေါ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သဘောမကျ စိတ်လက်မအီမသာ ဖြစ်လာပြီ ဆိုရင် - ကျွန်တော်ကတော့ ခုလို အကြံပေးလိုပါတယ်။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ကျကျနန ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ နောက်ပြီး သူနဲ့ စကားစမြည် ပြောပြီး သူ့ဆီက အကြံဉာဏ် တစ်ချို့ တောင်းခံကြည့်ပါ။ သူ့ဆီကနေပြီး ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှ မျှော်လင့်မထားတဲ့ IDEAS ကောင်းတွေ တစ်ပုံတစ်ခေါင်း ရရှိပြီး - အဲ့ အကြံဉာဏ်တွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖန်တီးနိုင်မှုအပေါ် ထိထိရောက်ရောက် အကျိုးပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် အာမခံပါတယ်။
တကယ်လို့ စာဖတ်သူဟာ အမြဲတမ်း ဖြစ်စေ ၊ ရံဖန်ရံခါဖြစ်စေ Hibernation mode ကို အသုံးပြုသူ ဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြမယ့် Trick ကို အသုံးမပြုပါနဲ့။ တကယ်လို့ Hibernation mode ဆိုတာကို စာဖတ်သူရဲ့ Desktop မှာ ဖြစ်စေ ၊ Laptop မှာ ဖြစ်စေ လုံးဝအသုံးမပြုသူ တစ်ယောက် ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ခုဖော်ပြမယ့် နည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်း အားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ System မှာ ရှိနေတဲ့ Hard disk space ထဲက မိမိအသုံးမပြုပဲ နေရာပေးထားရတဲ့4-6GB ပမာဏကို ပြန်လည်ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ How-To site တွေ How-To Geek တွေမှာလည်း ဒီ Hibernation mode နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး hiberfil.sys file တွေကို ဘယ်လို Delete လို့ ရနိုင်မယ် ၊ နောက်ပြီး hibernation mode ကို ဘယ်လို Disable လုပ်လို့ ရနိုင်မယ်ဆိုတာ အတူတကွ တွဲဖက်ပြီး ဖော်ပြထားတာ တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ သူတို့တွေကို လိုက်ပြီး မလေ့လာခင်မှာ hiberfil.sys ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကို အရင်ဆုံး လေ့လာကြရအောင်ပါ။
အဲတော့ hiberfil.sys ဆိုတာ ဘာများလဲ ??
Windows မှာ Power management အတွက် modes ( ၂ ) ခုရှိပြီး အဲ့ဒီ့ modes ( ၂ ) ခုက Sleep Mode နဲ့ Hibernate mode ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ ( ၂ ) ခုထဲကမှ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sleep Mode ဆိုတာ ကိုယ်အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကြောင့် ကွန်ပြူတာရှေ့ကနေ ထွက်သွားဖို့ ကိစ္စတစ်ခုခု ပေါ်လာတဲ့အချိန် - မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်း လတ်တလော ဖွင့်ထားတဲ့ webpage / Program စတာတွေကို ပိတ်မသွားချင်ဘူးဆိုတဲ့အခါ အဲဒီ့ Sleep Mode ကိုရွေးချယ်ပေးရပါတယ်။ အဲလို Sleep Mode ကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်တာနဲ့ အဲဒီ့ Mode ကနေပြီး PC ကို power အနည်းဆုံးနဲ့ Run ထားနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားပြီး ကိုယ်ကွန်ပြူတာ ရှေ့ကို ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ် ထွက်မသွားခင်က အခြေအနေအတိုင်း ဟန်အပျက် အမြန်ဆုံး မူလအခြေအနေကို ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို များသောအားဖြင့် ကွန်ပြူတာရှေ့ကနေ ခဏတဖြုတ် ( နာရီဝက် - တစ်နာရီ ) တန်သည် ဟိုထွက်သွား ဒီထွက်သွား သွားစရာရှိလာတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ )
နောက်တစ်ခုကတော့ Hibernate mode ပါ။ သူ့အကြောင်းကို အကျယ်လေ့လာချင်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ နားလည်လွယ်ဖို့ ဦးတည်ချက်ထားပြီး အတိုဆုံးနဲ့ မှတ်ရအလွယ်ကူဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖော်ပြပေးပါမယ်။ Hibernate mode ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုတာကို မလေ့လာခင် Hibernate mode ကို ဘယ်လို အခြေအနေမှာ သုံးလေ့ရှိကြလဲ ဆိုတာမျိုးကို အရင်ဖော်ပြပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အခြေအနေတစ်ခုမှာ ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေဆဲ အခြေအနေကနေ အရေးပေါ်ကြောင့် ဖြစ်စေ - မဖြစ်မနေ ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ ပေါ်လာတဲ့ လုပ်ငန်းကိစ္စ တစ်ခုကြောင့် ဖြစ်စေ လက်ရှိ ကွန်ပြူတာထဲမှာ လုပ်ဆောင်လို့ မပြီးသေးတဲ့ project တစ်ခုခု ၊ Program တစ်ခုခု ၊ Data ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု စသဖြင့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးကနေ အားလုံးပစ်ထားပြီး အချိန်ကာလ အတန်ကြာကြာ ထွက်သွားရမယ့် အခြေအနေမျိုး ရှိလာတတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ သွားရမယ့် ကြာချိန်ကလည်း ခုန ပြောခဲ့သလို ခဏတဖြုတ် ( နာရီဝက် - တစ်နာရီ ) တန်သည် ကြာမယ့်ဟာမျိုးက မဟုတ်လို့ Sleep Mode နဲ့ကလည်း ထားလို့မဖြစ် - နောင်တစ်ချိန် လုပ်ငန်းအားလုံး ပြီးသွားလို့ ကွန်ပြူတာရှေ့ ပြန်ရောက်ချိန် ကွန်ပြူတာ ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ နဂို လုပ်ဆောင်နေဆဲ အခြေအနေအတိုင်းလည်း ကိုယ်က ပြန်လိုချင် ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ( ၁ ) ချက်ခုတ် ( ၂ ) ချက်ပြတ် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ Hibernate mode ကို အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီတစ်မျိုးတည်း အတွက်နဲ့ Hibernate mode ကို အသုံးပြုတာမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာ ဆိုရင် အင်တာနက်သုံးခ ၊ မီတာခ ဆိုတာတွေက ကိုယ်သုံးစွဲတဲ့ အချိန်နဲ့လိုက်ပြီး ပေးချေရတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ကိုယ်တစ်နေရာရာသွားလို့ လတ်တလော အခြေအနေမျိုးကို ပျက်မသွားအောင် ကွန်ပြူတာကို နဂိုအတိုင်း ဖွင့်ထားခဲ့ပြီး ထထွက်သွားဖို့ ဆိုတာမျိုးက မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲလို အခြေအနေမျိုးမှာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းလည်း မပျက် Power ကိုလည်း ချွေတာရာရောက်အောင် Hibernate mode ကို အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကို power-saving mode လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ Hibernate mode ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့ အခါ ပြောင်းလဲသွားတာကတော့ ပုံမှန် program တစ်ခုခု run အလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အရင်က RAM ထဲမှာ memory အဌားသုံးပြီး Run နေရာကနေ - Hibernate mode မှာတော့ Computer ရဲ့ လက်ရှိ လုပ်ဆောင်နေမှု အခြေအနေအားလုံးကို နောက်တစ်ချိန်မှာ ပြန်လည် ခေါ်ယူ အသုံးပြုလို့ ရစေဖို့ အတွက် လတ်တလော အခြေအနေ RAM ထဲမှာ Run ထားသမျှ applications အားလုံးကို hard drive ထဲမှာပါ အကုန် save လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်ပြီးရှင်းရရင် - အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း RAM ဆိုတာ လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွေကို ခဏတာပဲ မှတ်သားပေးထားတဲ့ နေရာပါ။ သူက ကွန်ပြူတာကို power ပိတ်လိုက်လို့ပဲ ဖြစ်စေ - Error တစ်ခုခုတက်ပြီး အလိုလို Shutdown ကျသွားလို့ ဖြစ်စေ - မီးပျက်သွားလို့ ဖြစ်စေ စသဖြင့် ဘယ်လိုပဲ ကွန်ပြူတာ Shutdown ကျသွား ကျသွား memory အားလုံး ပျောက်သွားတတ်တာမျိုးပါ။ အဲတာကြောင့်လည်း စာရိုက်ရင်း save မလုပ်လိုက်မိခင် မီးပျက်သွားလို့ ရိုက်ထားသမျှ ပြန်မရတော့တာမျိုး ဆိုတာတွေ ကွန်ပြူတာ သုံးသူတိုင်း ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ Hibernate mode ကတော့ အဲလို မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ချင်တာလုပ် လုပ်သမျှကို HD ပေါ်မှာ မှတ်ပါတယ်။ အဲတာကြောင့်မို့လို့ လတ်တလော လုပ်ငန်းစဉ်ကနေ PC ကို shutdown ချပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တောင် Windows တက်လာချိန်မှာ နဂိုကွန်ပြူတာ မပိတ်ခင်က ကိုယ် ဘယ်နေရာမှာ ဘာလုပ်နေခဲ့သလဲ - အဲ့အခြေအတိုင်းပြန်လည်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Hibernate mode ဟာ hiberfil.sys file ဆိုတာကို အသုံးပြုပြီး PC ရဲ့ လတ်တလောအခြေအနေ ( Memory ) ကို ပြန်ပြီး store လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲ့အခြေအနေတွေ အားလုံးကို Windows ကနေ ထိန်းချုပ်စီမံ ခန့်ခွဲတာ မို့လို့ ဒီ file တွေကို ပုံမှန် အနေနဲ့ ဖျက်ထုတ်ပစ်လို့ မရပါဘူး။
အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အခါမှာ ကောင်းကျိုးတွေလည်း ရှိသလို ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ Hibernate mode ကို ဘယ်လို အခြေအနေမှာ အသုံးပြုကြတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ ပြီးပါပြီ။ အဲတာတွေက ကောင်းကျိုးတွေပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာ ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ Hibernate mode ကို On ထားခြင်း အားဖြင့် RAM ထဲမှာ Run ထားသမျှ applications အားလုံးကို hard drive ထဲမှာပါ အကုန် save လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် အဲလို Save လုပ်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ hard drive ဟာ လုံလောက်တဲ့ ပမာဏ ရှိနေဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ အခြေအနေတွေမှာ Hibernate mode ကို On ထားခြင်း အားဖြင့် Restarting လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ Operation မမှန်တာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Hibernate mode ဆိုတာ အသုံးတည့်တာ မှန်ပေမယ့်လို့ ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုသူတိုင်း အတွက်တော့ အသုံးမလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း Hibernate mode ကို On မထားကြဖို့ - ကွန်ပြူတာ ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ Software တွေ ဆိုရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ရင် Hibernate mode ကို Off ထားကြဖို့ အကြံပေးတာမျိုးတွေ တွေ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ Hard disk ပေါ်မှာ တစ်ခုခုကို နေရာပေးတဲ့ အချိန်မှာ MB လောက် ပမာဏဟာ ဘာမှ မပြောပလောက်ပေမယ့် GB လောက် ဖြစ်လာပြီ ဆိုရင်တော့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုလာပြီမလား။ ဒါမှလည်း ကိုယ့်အတွက် တကယ်အသုံးလိုတဲ့ စာအုပ်စာတမ်းလေးက အစ ၊ သီချင်းခွေ - ဓာတ်ပုံလေးတွေအဆုံး နေရာပေးနိုင်ဖို့ ပိုပြီး လုံလောက်သွားမှာပေါ့။
အဲတော့ Hibernate mode ကို အသုံးမလိုသူတွေ အတွက် Windows 7, Vista, နဲ့ XP မှာ ဘယ်လို Disable ပေးသွားမလဲ ဆိုတာ ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးသွားပါ့မယ်။ ဒီအကြောင်းအရာကတော့ အတော်များများ သိပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြည့်စုံစေချင်လို့ ဖြည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာပါ။
Windows7နှင့် Windows Vista တွင် Hibernate အား Disable ပေးခြင်း ( နှင့် hiberfil.sys အား Delete လုပ်ခြင်း )
ဖော်ပြတဲ့ အတိုင်း တွေ့နေရတဲ့ Hibernate mode ကို Disable လုပ်ဖို့ ဆိုရင် Start menu ကနေ Command prompt ကို Right-click လုပ်ပြီး administrator mode ကနေ အရင်ဝင်ရပါမယ်။ အဲ့ထဲကို ရောက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ Command ကို ရိုက်ရပါမယ်။
အဲလို လုပ်ဆောင်ပြီးသွားတာနဲ့ ဒုတိယပုံမှာ ကျွန်တော်တို့ တွေ့နေရတဲ့ Hibernate Mode ဟာ Shut down menu ကနေ လုံးဝပျောက်သွားတာကို ခုလို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါတင်မက အပေါ်ဆုံးပုံမှာ တွေ့နေရတဲ့ hiberfil.sys file ဆိုတာလည်း လုံးဝမရှိတော့တာ သတိထားမိ ကြပါလိမ့်မယ်။
Windows XP တွင် Hibernate Mode အား Disable ပေးခြင်း
Windows XP မှာ Hibernate mode ကို Disable ပေးရတာ အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာတွေထက်ပိုလွယ်ပါတယ်။ Control Panel > Power Options > ကို သွားပြီး Hibernate tab ကို ရှာပါ။ ပြီးရင် Hibernate အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ Enable Hibernation ဘေးက Check box မှာ Uncheck ပေးပြီး Reboot လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Hibernation mode ကို Disable ပေးပြီးသား ဖြစ်သလို hiberfil.sys file ကိုလည်း Delete ပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။